Gịnị Bụ 'Ntọala Ntọala Ntọala' Na iPhone? Nke a bụ Eziokwu! - Iphone
isopropyl mmanya iphone mmebi mmiri
gịnị kpatara oge ihu m ji ekwu na -eche maka ịgbalite
otu esi edozigharị bluetooth na iphone
enweghị ip iphone 6 gbakwunyere
esi mee ka ihuenyo ipad bugharia
Gịnị Bụ A 'ụgbọelu Ntọala Mmelite' Na An iPhone? Nke a bụ Eziokwu!
Na-agbanye iPhone gị ozugbo wee hụ mmapụta nke na-agụ, 'Nwelite Ntọala Ntọala'. Ọ D MMA, ntọala ọhụrụ dị - mana gịnị ka ozi a pụtara, ị kwesịrị imelite? N'isiokwu a, m ga-akọwa gịnị mere o ji ekwu 'Mmelite Ntọala ụgbọelu' na iPhone gị , ihe a ụgbọelu ntọala update eme gị iPhone , ma gosi gị esi lelee maka mmelite ntọala ụgbọelu n'ọdịnihu.
Gịnị Bụ A 'Ntọala Ntọala Mmelite'?
Mgbe ị hụrụ ọkwa nke na - ekwu 'Mmelite Ntọala ụgbọelu' na iPhone gị, ọ pụtara na Apple ma ọ bụ ụgbọelu ikuku gị (Verizon, T-Mobile, AT&T, wdg) ewepụtala mmelite site na ntọala ndị ọrụ ụgbọelu ọhụrụ ga - enyere aka melite iPhone gị ike jikọọ na ikuku gị ụgbọelu na netwọk.
kedu ihe enyí pụtara na nrọ
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nọ na AT & T, ị nwere ike ịhụ ozi na-ekwu 'Mmelite ụgbọelu AT & T' ma ọ bụ 'mmelite ụgbọelu ATT'.
Ọ Dị Mkpa Imelite ụgbọelu Ntọala Na My iPhone?
Mgbe gị wireless ụgbọelu mmelite ha technology, gị iPhone nwekwara imelite iji jikọọ na na nkà na ụzụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na ịnweghị mmelite ntọala ụgbọelu, iPhone gị nwere ike ọ gaghị enwe ike ijikọ ya na ihe niile ihe ntanetị gị na-enye. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa ijide n'aka na ị na-eme melite ntọala ụgbọelu maka iPhone na 2020 ma wụnye ntọala ụgbọelu ndị ọhụrụ ahụ.
Ọzọkwa, a ụgbọelu ntọala melite na gị iPhone nwekwara ike ịme ọhụrụ atụmatụ dị ka Wi-Fi ọkpụkpọ ma ọ bụ olu-ihe karịrị-LTE, ma ọ bụ idozi chinchi chinchi na glitches na-eme nsogbu maka ọtụtụ iPhone ọrụ.
Kedu ka m ga - esi mara ma melite Ntọala Njikwa ụgbọelu dị?
Mgbe mmelite ntọala ụgbọelu dị, ị ga-enwetakarị mmapụta kwa ụbọchị na iPhone gị nke na-ekwu, “Riergbọelu Ntọala Mmelite: Ntọala ọhụrụ dị. Nwere ike imelite ha ugbu a? ”
Ma gịnị ma ọ bụrụ gị chọrọ iji chọpụta maka a ụgbọelu ntọala melite aka? Enweghị bọtịnụ 'Lelee maka mmelite ụgbọelu' ebe ọ bụla na iPhone gị. Enwere ụzọ ọzọ ịlele:
Elele maka a ụgbọelu ntọala melite gị iPhone, imeghe Ntọala ngwa ma pịa General -> Banyere. Ọ bụrụ na enwere ntọala ntọala ụgbọelu dị na iPhone gị, mmapụta ga-apụta na ihuenyo na-ajụ ma ịchọrọ ị melite. Ọ bụrụ na 15-30 gafere ma ọ nweghị mmapụta na-egosi na iphone gị, nke ahụ pụtara na enwere ike ọ bụghị mmelite ntọala ndị ọzọ maka iPhone gị na 2020.
Olee Otú M Melite ụgbọelu Ntọala Na My iPhone?
Imelite ụgbọelu ntọala gị iPhone, enweta Mmelite mgbe njikere pụtara na ihuenyo. N'adịghị ka ndị ọzọ mmelite ma ọ bụ resets, gị iPhone agaghị Malitegharịa ekwentị mgbe ụgbọelu ntọala na-emelite.
Etu esi lelee ma ọ bụrụ na Ntọala ụgbọelu iPhone dị ruo ụbọchị
Ọ bụrụ na ị maghị ma ntọala ụgbọelu emelitere n'ezie, mee nke a:
Tụgharịa gị iPhone anya na azụ na ọzọ site na ịpị ike button ruo mgbe slide ka ike gbanyụọ na-egosi na ihuenyo gị iPhone. Mgbe ahụ, swipe akara ngosi ike uhie site n'aka ekpe gaa n'aka nri iji mechie iPhone gị.
Chere ihe dị ka sekọnd 30, wee gbanwee iPhone gị site na ịpị na ijide bọtịnụ ike ruo mgbe akara Apple gosipụtara ozugbo na etiti ngosipụta iPhone gị.
Mgbe ahụ, na-emeghe na Ntọala ngwa ma pịa General -> Banyere . Ọ bụrụ na njikere adịghị mmapụta na ihuenyo ahụ na-ekwu na melite ntọala ụgbọelu dị na iPhone gị, nke ahụ pụtara na ntọala ndị ọrụ ụgbọelu gị dị ugbu a.
Ntọala ụgbọelu: Emelitere!
Ntọala ụgbọelu gị dị ugbu a na oge ọzọ ị ga-amata ihe ọ pụtara mgbe iPhone kwuru 'Ntọala Ntọala ụgbọelu'. Ọ ga-amasị m ịnụ n'ọnụ gị na ngalaba nkọwa dị n'okpuru, echefukwala ịgbaso Payette Forward na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta maka ọdịnaya iPhone kachasị mma na ịntanetị!